Irakh - ALinks
Zithini iindleko zokuhlala eIraq?
January 10, 2022 IShubham Sharma Irakh, imali
I-Iraq okanye ngokusemthethweni iRiphabhliki yase-Iraq lilizwe elikwi-ntshona ye-Asiya. IBaghdad yidolophu eyintloko ye-Iraq, likhaya kwezinye zeentlobo ezahlukeneyo zobuzwe. I-Iraq ikakhulu inabemi
Ungawufumana njani umsebenzi eIraq?
January 10, 2022 IShubham Sharma Irakh, imisebenzi
I-Iraq ityetyiswe ngelifa lemveli, iimbongi ezidumileyo kwihlabathi, abazobi, kunye nabayili bemifanekiso eqingqiweyo kwiArabhu. Ukuba uceba ukufudukela e-Iraq, kuqala, kuya kufuneka ujonge ukuba ungasifaka njani isicelo se-visa yase-Iraq. Eli linyathelo lokuqala; emva
January 8, 2022 UAntika Kumari Irakh, ivisa
Kule nqaku, uya kwazi ukuba ungayifaka njani i-visa yase-Iraq. Yintoni imfuneko yokufaka isicelo se-visa yeshishini, ivisa yabakhenkethi? Kuthatha ixesha elingakanani ukufikelela kwi-Iraq, kwaye njani
I-visa yaseTurkey yama-Iraq
Agasti 27, 2021 IShubham Sharma Irakh, hamba, ikarikuni, ivisa
Eyaziwa njengeRiphabhlikhi yaseTurkey, iTurkey lilizwe elihleli kwiziphambuka zaseYurophu naseAsia. Ikomkhulu layo kunye nesona sixeko sikhulu, iAnkara, sesona sixeko sikhulu eTurkey. Ngenxa yoko, yabelana ngemida neGrisi
Amazwe asimahla eVisa eIraq
Julayi 8, 2021 UMaitri Jha Irakh, hamba, ivisa
Abemi beepasipoti zaseIraq banelungelo lokundwendwela amazwe asibhozo ngaphandle kwevisa. ISvalbard, iMalaysia, iBermuda, neDominica ziphakathi kwamazwe aphezulu. NgokweSikhokelo sePasipoti yokuSekwa ​​kwePasipoti, ipasipoti yaseIraq ikwinqanaba le-107. Inqanaba njenge
Inkqubo yeendlela zokuThutha eIraq
Februwari 17, 2020 UAntika Kumari yibakhona, Irakh
Inkqubo yeendlela zokuThutha eIraq zilula kakhulu kwaye zigudile. Umntu unokufumana phantse kuyo yonke indawo. I-Iraqis ixhomekeke kwinto esiyibiza ngokuba yi-nafarat1 emele inani leeminibus zokubutha kwigaraji, kwigaraji ezinkulu, apho iimoto ziye khona
Februwari 13, 2020 IShubham Sharma impilo, Irakh
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, i-Iraq iphuhlise inkqubo yasimahla yokubonelela ngempilo. Kwi-1970, baqala ukusebenzisa isibhedlele esisekwe esibhedlele kunye nemodeli eyinkunzi enkulu yokhathalelo lonyango. I-Iraq, ngokungafaniyo namanye amazwe ahluphekayo, egxile kukhathalelo lwempilo
Ihotele ezigqibeleleyo zokutyela eIraq
Februwari 12, 2020 UMaitri Jha iihotele, Irakh
I-Iraq sisixeko samasayithi angcwele amandulo, iintaba ezixokozelayo kunye nokuphefumla okuthatha iintaba. Sisizwe sokuqala apho impucuko yokuqala yasekwa khona. I-Iraq lilizwe elisisityebi kakhulu kuyo